Tapakila fiarandalamby Trenitalia mora ary vidiny fitsangatsanganana | Save A Train
Tapakila fiarandalamby Trenitalia mora ary vidiny fitsangatsanganana
an-trano > Tapakila fiarandalamby Trenitalia mora ary vidiny fitsangatsanganana
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakila fiaran-dalamby Trenitalia SY Vidin'ny dia fitsangantsanganana ary tombony.
Lohahevitra: 1. Trenitalia amin'ny alàlan'ny Hevitra Misongadina
2. Momba ny Trenitalia 3. Fiatrehana ambony hividianana tapakila fiaran-dalamby trenitalia
4. Ohatrinona ny vidin'ny tapakila Trenitalia 5. Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra Trenitalia, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
6. Inona no mahasamihafa ny standard Economy, Premium, Business sy Executive amin'ny Trenitalia 7. Misy ve ny famandrihana Trenitalia
8. Hafiriana talohan'ny nialan'ny Trenitalia no hahatongavany 9. Inona no fandaharam-potoanan'ny lamasinina Trenitalia
10. Iza no serivisy atolotry ny Trenitalia 11. Trenitalia FAQ
Trenitalia amin'ny alàlan'ny Hevitra Misongadina
Ny orinasany Trenitalia dia natsangana tamin'ny 1 jona 2000.
In 2005, ny Frecciarossa 1000, Ny tsipika fiaran-dalamby trenitalia no vita. Ny hafainganam-pandehan'ny Frecciarossa 1000 mahazo 300km isan'ora.
Ny lalam-by lehibe iraisam-pirenena dia eo anelanelan'i Genève sy Milan ary mila izany 4 ora ao anaty Trenitalia.
Trenitalia dia miasa serivisy fitaterana lavitra sy fifandraisana ary fiaran-dalamby any amin'ny toerana rehetra any Italia.
Momba ny Trenitalia
Trenitalia haingam-pandeha haingam-pandeha dia serivisy mampifandray ny avaratra sy ny atsimo ary ny atsinanana miankandrefana any Italia ary koa i Italia miaraka amin'i Soisa, Frantsa, Aotrisy, ary Alemaina.
ny trenitalia trains dia mandeha amin'ny 3oo km isan'ora amin'ny lalan'ny lamasinina hafainganam-pandeha.
Amin'ny rariny fotsiny 3 ora maro azonao avy eo Milan ka mankany Roma ary avy any Milan mankany Bologna ao 1 ora.
Mandeha Tehirizo ny tranokala fiaran-dalamby na ampiasao ity widget ity hikarohana azy tapakila ho an'ny Trenitalia
Fiatrehana ambony hividianana tapakila fiaran-dalamby trenitalia
isa 1: Soraty mialoha araka izay azonao atao ny tapakilan'ny Trenitalia
Tapakila Trenitalia azo anelanelan'ny 2 ny 4 volana mialoha ny daty fialana. Ny famandrihana tapakila Trenitalia mialoha dia manome antoka ianao fa hahazo ny tapakila mora vidy izay tena voafetra. Fiakarana lamasinina hiakatra amin'ny vidiny rehefa manakaiky ny andro fitsangatsanganana ianao, ka mba manangom-bola amin'ny vidin'ny tapakilan'ny lamasininao, manafatra mialoha araka izay azo atao.
isa 2: Fitsangatsanganana an-trano Trenitalia amin'ny fotoana fohy
Ny tapakilan'ny Trenitalia dia mora vidy mandritra ny ora fiatrehana, amin'ny fanombohan'ny herinandro, ary mandritra ny andro sy antenatenan'ny herinandro dia fitsangatsanganana fiaran-dalamby (Talata, Alarobia, sy Alakamisy) matetika no atolotra ny vidiny mora indrindra. Ho an'ny vidiny tsara indrindra, aza mitondra fiaran-dalamby Trenitalia amin'ny maraina sy maraina hariva mandritra ny herinandro (noho ireo mpanao dia lavitra mpivahiny). Mialà raha azo atao ny mandeha lamasinina Trenitalia amin'ny zoma sy harivan'ny alahady (mety amin'ny alàlan'ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro) ary mandritra Fety besinimaro ary koa mandritra ny fialantsasatry ny sekoly satria amin'ireto fotoana ireto, ny vidin'ny tapakila Trenitalia skyrocket.
isa 3: Alefaso ny tapakilan'ny Trenitalia rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoananao
Ny serivisy entin-tsofina amin'ny trenitalia dia tena ilaina. Ny tapakila fiaran-dalamby Trenitalia Base dia azo atakalo sy ovaina tsy misy fetra ary ny tapakila Economy Standard dia azo ovaina indray mandeha alohan'ny datin'ny fiaingan'ny fiaran-dalamby. Tsy azonao atakalo na averina ny tapakila Trenitalia hafa, fa misy ny seha-pifandraisana amin'ny Internet ahafahanao mivarotra fanindroany ny tapakila Trenitalia anao. Tehirizo ny torolàlana momba ny lamasinina Fitsangatsanganana trenitalia dia ny boky rehefa azo antoka fa ny fandaharam-potoananao.
isa 4: Vidio ny tapakilan'ny Trenitalia amin'ny Save A Train
Save A Train dia manana tolotra be indrindra amin'ny tapakilan'ny lamasinina any Eropa sy manerantany, mahita ny tapakila Trenitalia mora vidy indrindra izahay. Izahay dia mifandray amin'ireo mpandraharaha lalamby maro sy ny teknolojia teknolojia manome anay anao ny tapakila Trenitalia mora indrindra any Italia miaraka amin'ny fampifangaroana mpandraharaha fiaran-dalamby hafa mankany amin'ny toerana hafa. Mety mahita vahaolana hafa amin'ny lamasinina Trenitalia koa izahay.
Bari to Fasano tapakila
Tapakila Taranto mankany Fasano
Tapakila Milan ho any Florence
Tapakila Venice mankany Milan
Ohatrinona ny vidin'ny tapakila Trenitalia?
Ny vidin'ny tapakila Trenitalia ohatra dia afaka manomboka amin'ny € 21 amin'ny fotoana fampiroboroboana nefa mety hahatratra € 97 amin'ny minitra farany. Vidiny tapakila tapakila miankina amin'ny kilasy nofidinao ary indreto ny latabatra famintinana ny vidin'ny salan'isa amin'ny kilasy ho an'ny Rome-Naples / Roma – Milano / Milano – Florence fiaran-dalamby:
Malagasy 21 € – 70 € 40 € – 130 €
Premium 42 € – 90 € 78 € – 172 €
raharaham-barotra 47 € – 97 € 90 € – 190 €
Tapakila Milan to Naples
Tapakila Florence mankany Naples
Tapakila Venice mankany Naples
Tapakila Pisa mankany Naples
Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra Trenitalia, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina?
1) Ny tombony amin'ny fiaran-dalamby Trenitalia dia manomboka amin'ny fahafahanao miainga sy tonga mivantana any afovoan-tanàna amin'izay tanàna andehanananao.. Certainly, ity dia zavatra tsy manam-paharoa amin'ny fiaran-dalamby, indrindra raha mampiofana fitsangatsanganana avy any Roma ianao, Milano, Florence, Geneva, na Monaco, tombony lehibe ho an'ny Trenitalia izany. Noho ny zava-misy fa ny dia dia mivantana mankany afovoan-tanàna, manalavitra ny fitohanan'ny lozam-pifamoivoizana ianao ary tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny mijanona ao anaty fifamoivoizana amin'ny fialan-tsasatra.
Rehefa tonga amin'ny tapakilan'ny lamasinina Trenitalia vidiny, matetika dia miovaova ny vidiny. Ny fampiroboroboana sasany dia ahafahanao mahazo tapakila fiaran-dalamby mora, fa mandritra ny andro farany alohan'ny hialana, mihabe ny vidiny ka raha tianao ny mandehandeha mandehandeha, Trenitalia ho anao!
2) Ny fitsangatsanganana fiaramanidina dia misy ny filaminan'ny fiarovana fiaramanidina. Midika izany fa tsy maintsy farafaharatsiny ianao 2 ora alohan'ny hialanao amin'ny fotoana voatondro. Miaraka amin'ny Trenitalia, mila tonga marina ianao 30 minitra mialoha. ihany koa, mila miverina eny amin'ny seranam-piaramanidina avy ao afovoan-tanàna ianao. Noho izany, raha toa ka manisa ny fotoana dia, Trenitalia dia mandresy hatrany amin'ny ora fitsangatsanganana rehetra ary koa amin'ny vidiny raha ataonao ny volanao tahaka ny vola.
3) Indraindray ny vidin'ny tapakila Trenitalia dia avo noho ny fiaramanidina amin'ny sandan'ny vidin'ny tapakila, fa ny fampitahana dia tokony hampiditra ny vidiny amin'ny fitaovam-pitaterana any amin'ny seranam-piaramanidina. afa-tsy, amin'ny tranga sasany, mahazo fotoana be koa ianao rehefa nandalo lamasinina Trenitalia ary farany miaraka amin'i Trenitalia, tsy manana saram-pitondrana valizy ianao.
4) Farany, Ny fiaramanidina dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fandotoana rivotra, eo amin'ny ambaratonga fampitahana, Fiaran-dalambohitra be namana kokoa, ary raha mampitaha ny fiaramanidina amin'ny fitsangatsanganana ianao, Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby dia 20x latsaka ambany indrindra noho ny valan-javaboary amin'ny fiaramanidina.
Tapakila Milan to Genoa
Roma mankany amin'ny tapakila Genoa
Tapakila Florence mankany Genoa
Tapakila Venice mankany Genoa
Inona no tsy mampitovy ireo ny toekarena fenitra, Premium, raharaham-barotra, ary Mpanatanteraka amin'ny Trenitalia?
Trenitalia dia manolotra serivisy kilasy fivarotana fiaran-dalamby maro izay voaorina ho an'ny teti-bola sy karazana fitsangatsanganana, raha mpivarotra raharaham-barotra ianao, fialam-boly, na izy roa.
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny kilasy tapakila fiaran-dalamby ao Trenitalia dia ny tsy fetezan'ny fanovana tapakila, vidin'ny, ary serivisy. koa, tapakila fiaran-dalamby ara-toekarena mahazatra no fomba mora indrindra sy malefaka indrindra handehanana any Italia.
Tapak'i Trenitalia ara-toekarena fenitra:
Ny Trenitalia Tapakila fiaran-dalamby ara-toekarena mahazatra no mora indrindra amin'ny saran-dalan'ny Trenitalia rehetra. Ny tsara indrindra dia ny hamandrihana mialoha ity bileta fiaran-dalamby ity satria ambany ny vidin'ny tapakila – amidy haingana izy ireo. Ireo mpandeha mitana tapakila fiarandalamby dia afaka maka valizy mifanaraka amin'ny banga, maimaim-poana ary afaka manafoana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby alohan'ny fiaingany ary mahazo tamberim-bola (fihenan'ny fihenan'ny 20%).
Tapak'i Trenitalia ho an'ny ekonomika:
Ny kilasy tapakila fiaran-dalamby izao dia lafo lavitra noho ny karazana tapakila Standard Trenitalia, ny Tapakilan'ny Ekenisa Trenitalia Premium dia manolotra serivisy fanampiny. Ity karazana lisitra fiaran-dalamby ity dia hita ao amin'ny fiaran-dalamby ao Trenitalia misy làlan-kaleha ary mamela fanovana fotoana sy daty fotsiny raha tsy amin'ny daty hialana..
Ho fanampin'ny tombony amin'ny tapakila fiaran-dalamby mahazatra, Ny tapakila Trenitalia Economy Premium dia manome seza tsara kokoa miaraka amin'ny efitrano fandefasana tongotra sy fipetrahana mipetrapetraka amin'ny dia lavitra. Ambonin'izany rehetra izany, misy ny menus sakafo telo azonao isafidianana ary sakafo kely sy zava-pisotro no homena anao eny amin'ny seza misy anao eo ambonin'ny lamasinina Trenitalia.
Tapak'i Treintalia Business:
ny Tapakila Business Trenitalia ny mpividy dia afaka mankafy ny tombony rehetra nosoratanay tetsy ambony ihany, ny mpandeha ao amin'ny Trenitalia Business Premier dia mahazo tombony amin'ny harona harona maro, seza seza ergonomika malefaka, efitrano malalaka, menus sakafo telo tokony hofidina. Ary, manana rindrina ho an'ny tsiambaratelo sy faritra mangina ao amin'ny faritra voatondro ho mpandraharaha amin'ny lamasinina Trenitalia ianao.
Tapak'i Treintalia Executive:
ny Tapakila Executive Trenitalia Ireo mpividy dia afaka mankafy ny tombony rehetra voalaza etsy ambony, ankoatry ny seza hoditra ergonomika mihoa-pampana mba hametrahana ny lohany ary hankafizany ny fahitana any Italia..
Misy takelaka TrenitaliaY?
Misy Pass ho an'i Italia, fa ny safidy mora vidy ihany no hanoroana azy ireo raha toa ianao ka mikasa hanao fiaran-dalamby 14 andro, ny famandrihana dia ahafahana mamantatra an'i Italia amin'ny fiaran-dalamby miaraka amin'ny pasina manokana. Misy 3 misy ambaratonga azo: Tsotra, Comfort, ary Mpanatanteraka ary azonao atao ny misafidy ny isan'ny dia 3 ny 10 ary misafidiana ny karazana fiaran-dalamby avy amin'ny Frecce haingam-pandeha mankany amin'ny intercity sy EuroCity.
Azo jerena amin'ny endrika endrika taratasy ny mpandalo ary tsy maintsy ahetsika ao anatiny 11 volana hatramin'ny andro nividianana.
Hafiriana talohan'ny nialan'ny Trenitalia no hahatongavany?
Hahazo ny lamasinina Trenitalia anao ary ho tonga ara-potoana, ny gara dia manoro hevitra ny hahatongavana 30 minitra alohan'ny hiaingan'ny lamasininao. Izahay tokoa ao amin'ny Save A Train, minoa fa ampy ny fotoana ary afaka mankafy ireo fivarotana ianao ary mahazo ireo zavatra ilainao Ny fitsangatsanganana lamasinina mba ho malefaka araka izay azo atao.
Inona no fandaharam-potoanan'ny lamasinina Trenitalia?
Fanontaniana henjana ity fa ny iray izay afaka mamaly amin'ny Save and Train amin'ny fotoana feno sy tena izy. Mandehana amin'ny takelaka misy anay amin'ny antsipiriany, type ny fiavianao sy ny alehanao any Italia, ary afaka mahita ny tena marina ianao Trenitalia lamasinina lamasinina misy. Ny fiaran-dalamby dia mihazakazaka dieny aloha 6 AM 11 hariva ny hariva avy any Milan mankany Bologna, mba hanazavana ny ankamaroan'ny fiaran-dalamby Trenitalia dia mihazakazaka hatramin'ny hariva be ary misy fiaran-dalamby miainga isaky ny antsasak'adiny na mahery.
Iza no serivisy atolotry ny Trenitalia?
Trenitalia manarona an'i Italia rehetra, na izany aza, ny tobim-pirenena lehibe dia i Milan, Roma, Venise, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, ary Verona. Misy 11 onjam-peo iraisam-pirenena: 5 Trenitalia fiaran-dalamby any Switzerland ary 6 gara any Frantsa ary vitsivitsy any Austria sy Alemana ary Kroasia. Mazava ho azy fa afaka mandeha am-pitoniana sy haingana ianao amin'ny alàlan'ny eropeana tsara tarehy ary mankafy ny fomba fijery italiana nefa tsy misy zavatra very!
Ny foibe fiaran-dalamby any Milan no misy ny foibeny Piazza Duca d'Aosta. Ny gara lamasinina dia manaitra ny Archive ary voahodidina skyscrapers. Ka raha miandry miakatra amin'ny lamasinina Trenitalia ianao dia afaka mandehandeha ary mankasitraka ireo sary sokitra mahatalanjona.
Rome Termini no iray amin'ny garan-dalamby lehibe indrindra any Eropa. Eo amin'ny ilan'ny avarotan'i Diocletian any Roma no misy azy io. Ny fidirana amin'ny terminal dia avy ao Piazza dei Cinquecento. Misy 29 ao amin'ny efitranon'ny gara ny sehatra eo amin'ny terminal sy ny biraon'ny tapakila fiaran-dalamby Trenitalia.
Fiaran-dalamby any Florence, Santa Maria Novella, dia lavitra dia lavitra ny Duomo sy ny zavatra mahasarika indrindra ao amin'ny tanàna tranainy any Florence. Ny fiantsonana dia nomena anarana taorian'ny fiangonana Santa Maria Novella eo ampitan'ny fidirana. Noho izany, mora nangalatra fotoana fohy kely vitsivitsy ianao tao an-tanàna taloha, alohan'ny hanohizanao anao fitsangatsanganana manaraka ao Italia.
Renivohitra Naples dia atsinanan'ny tanàna taloha. Raha mikasa hanao vitsivitsy ianao fitsangatsanganana an-andro avy any Naples amin'ny Pompeii na Sorrento, dia hijanona eo amin'ny garan-dalamby Naples ianao amin'ny fitsangatsanganana lamasinina.
Raha tsy azonao antoka hoe toerana fiaran-dalamby voafidy ao anatin'ny tanàna izay vangianao, nanao ny tranonkala All Stations izahay ho an'ny ankamaroan'ny tanàna lehibe, ka ny algorithm ataonao dia hisafidy anao ny toerana mety hialana sy hahatongavana.
Inona no tokony entiko mitondra any amin'ny Trenitalia?
Zava-dehibe toy izany koa ny mitondra ny tenanao mankany amin'ny Trenitalia dia ilaina. Ambonin'izany dia alao antoka fa manana ny antontan-taratasy fitsangatsanganana Trenitalia amin'ny findainao na pirinty ary pasipaoro manan-kery dia tsy maintsy ananana ary tsara foana raha manana fiantohana fitsangatsanganana.
Izay orinasa tompon'ny Trenitalia?
Trenitalia dia an'ny governemanta italianina ary ao amin'ny FS Italiane Group.
Trenitalia FAQ momba ny toerana ahafahako mandeha miaraka amin'ny Trenitalia?
Regional, fiaran-dalamby metaly sy iraisam-pirenena, Ny fiaran-dalamby Trenitalia dia afaka mitondra anao na aiza na aiza any Italia sy any amin'ireo firenena voafantina izay misy sisintany amin'i Italia. Ohatra, miaraka amin'ny lalamby haingam-pandeha Trenitalia afaka mandeha any Frantsa sy Suisse ianao.
Inona avy ireo fomba fandroahana ho an'ny Trenitalia?
Tsy mora kokoa ny famandrihana tapakila fiaran-dalamby sy amin'ny sambo Trenitalia. Afaka mividy mora foana ny tapakilan'ny Trenitalia amin'ny farany minitra an-tserasera ary hatramin'ny 1 ora talohan'ny hivoahan'ny fiaran-dalamby. Ho an'ny board, pasipaoro fotsiny no ilainao ary koa ny fampisehoana ny kaody PNR (6-kaody isa). Manazava, ny kaody PNR dia alefa aminao amin'ny mailaka fanamafisana ny famandrihana miaraka amin'ny tapakila e. Tsy mila manonta mialoha ny tapakilan'ny lamasinina ianao satria azo alaina amin'ny findainao ary apetaka amin'ny mailaka fanamafisana, ary ny mpiandraikitra ny fiaran-dalamby dia afaka manamarina ny tapakilanao amin'ny anarany amin'ny tranga ratsy indrindra.
Inona ny serivisy amin'ny Trenitalia?
Ny lamasinina ao amin'ny Trenitalia dia manana toeram-pisotroana kafe amin'ny lamasinina voatokana ho an'ny zava-pisotro sy sakafo maivana. Ahitana ny sandwich ny menu, sôkôla sôkôla, tsakitsaky, sôkôla sôkôla, kafe, sokola mafana, sy dite ary afaka mihinana sy misotro amin'ireto fiaran-dalamby ity ianao na haka izay novidinao niverina tamin'ny seza. Raha mandeha amin'ny Business ianao, Premium, na Kilasy voalohany azonao atao ny misafidy fisotroana tongasoa maimaimpoana amin'ny safidy iray 9 misy zava-pisotro misy rano mamy, hanim-py, na tsakitsaky tsy misy gluten. Amin'ny lamasinina Trenitalia rehetra, misy lavaka mandeha akaikin'ny seza misy anao.
FAQ Trenitalia fangatahana indrindra – Tsy maintsy manolotra seza mialoha mialoha ao amin'ny Trenitalia aho?
Rehefa mametraka tapakila Trenitalia ianao, omena anao ny seza iray ary tsy afaka mijanona seza manokana ianao rehefa manao famandrihana. Raha misy seza malalaka rehefa mandeha ny lamasinina, avela handehandeha ianao, manova seza, sy manana habaka hafa.
Misy Aterineto WiFi misy ao Trenitalia?
Rehefa mividy ny tapakilan'ny Trenitalia ianao mialoha, afaka mankafy ianao Internet maimaim-poana amin'ny Internet amin'ny lamasinina sy kilasy karazana Trenitalia frecciarossa rehetra.
In conclusion, raha tonga hatreto ianao, fantatrao izay rehetra ilainao momba ny fiaran-dalamby Trenitalia ary vonona hividy ny tapakilan'ny fiarandalamby Trenitalia SaveATrain.com.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.